I-Posh Rust Hack i-cheats, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Posh Rust kugula
Ngaba ayicacanga? Sesona sikhethe ngokugqibeleleyo iiRust PvP Hacks-thenga iMveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Sebenzisa iRust Posh Hack kwinzuzo yakho ixesha elide kunosuku ukuba ungathanda-uthenge i-1-Veki yeMveliso ephambili namhlanje!
Kutheni ungazinikeli ubukhulu? Ungakhangela ngokude-uthenge i-1-yeNyanga yeMveliso ePhambili namhlanje!
Ulwazi lweRust Posh
Ngaba ungumdlali weRust odla ngokugxila kumgangatho wePvP wezinto? Enye yeendlela ezingakhathalelwanga zomdlalo, kwaye kuyadanisa ukuba abantu abaninzi abayidlali! Ngale nto ithethwayo, kunokuba ngenxa yazo zonke "ukubila okumnandi" okulindelweyo kwizithunzi zabadlali be-novice- ukuba ubukwicala elingelilo le-noob beatdown kwiRust PvP, sisixhobo esifanelekileyo kuwe. Umhlwa wethu uPosh Hack uzinikele ngokupheleleyo kwi-PvP, ke ukuba leyo yindlela yakho yokhetho, esi sisixhobo ekufuneka usenzile.
Zininzi izinto ze-PvP ekufuneka ziqwalaselwe, njenge-Enemy ESP kunye ne-Enemy Info (ingakanani impilo abayishiyileyo, umgama, amathambo e-ESP, njl.) Kunye neRust Aimbot eyahlukeneyo. Ngelixa ingenazimpawu ze-PVE, isisisixhobo esisebenzayo kwabo bajonge ukuba bathi kukhuphiswano.
I-Posh kukukhohlisa okujolise kwi-PVP. Ayinaempawu zePVE.
Utshaba i-ESP (Ibhokisi, amathambo)
Ulwazi lotshaba (impilo, abalalayo, njl.
Iiphalethi zombala we-ESP
Imowudi yosuku lonke
Malunga neRust Posh
URust Posh yinto elula kakhulu yokukopela i-PvP enokusetyenziswa nangubani na, njengoko konke ekufuneka ukwenzile kukusebenzisa i-hack. Ubuqhetseba boNgaphandle kwaye abunakusetyenziswa kwimowudi yesikrini esigcweleyo, nayo ayizi neHWID Spoofer (nangona sinikezela ngeHWID Spoofer ukhetho lweRust!). Esona sesona sixhobo se-PvP sesona sakha sasikhutshelwa iRust, ke ungaphoswa lithuba lakho lokufumana ithuba. Ukuba uyagula kwaye udiniwe kukuphulukana nabadlali abanamava ngakumbi, okanye abagcini ngokufanayo, unokuthembela kwiRust Posh Hack yokugcina uqhubeka.
Kutheni usebenzisa iRust Posh ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Rust Posh sisisombululo esifanelekileyo sabadlali bePvP kwihlabathi liphela. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ayinalo naluphi na uhlobo lwecandelo le-PvE, kodwa isakunika ithuba elikhulu ngelixa ukhuphisana kwi-Intanethi. Uya kube ugqogqa iziseko kwaye ubulale abadlali bezinga eliphezulu ngokukhawuleza xa iRust Posh Hack yenziwe ukuba yenziwe, njengoko yakhiwe kuphela ukukuguqula ube ngumatshini wokubulala. I-Rust Aimbot ebandakanyiweyo ngaphakathi ayinakuthelekiswa nanto ngokubhekisele kumgangatho, kunye neempawu zokhuseleko! Ukuba ufuna ukuqhekeza kwiRust PvP ngoxolo lwengqondo, ayikho enye indlela ebhetele yokuHamba iRust Posh kuHack!
Ungasondela kumava akho e-PvP ngochukumiso lobuqu, njengoko unokwenza ngokuseto ngokupheleleyo useto lomnatha olufumaneka kwiRust Posh. Imenyu yomdlalo ongaphakathi komdlalo inomdla kakhulu kwaye ikuvumela ukuba utshintshe malunga nayo nayiphi na into, ukusuka kwisantya apho iRust Aimbot yethu izakujikeleza khona, ukuya ezona zikhetho ze-ESP uza kuzibona kwiscreen sakho. Sonke siceba ukudlala umdlalo ngokwahlukileyo, yiyo loo nto singafuni ukunciphisa abasebenzisi bethu ekusebenziseni useto lomnqweno wokungaqhelekanga. Ukuba ufuna ukutshintsha into, yenze! Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa imenyu yomdlalo ongaphandle komdlalo ayikho.
A5. Ewe, obu buqhetseba bubandakanya i-hwid spoofer.
Ilindelwe Lawula kunye neRust Posh Hack yethu?